Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » FAA machibidoro ndị ụgbọ elu US niile ife efe n'elu Afghanistan
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye ọ bụla na -arụ ọrụ ụgbọ elu obodo US nke chọrọ ịgbaba n'ime/pụọ ma ọ bụ gafere Afghanistan ga -enwerịrị ikike n'aka FAA.
FAA kwuru na ọ nweghị onye na -achịkwa ọdụ ụgbọ elu Kabul.
A naghị arụ njikwa ụgbọ elu na Afghanistan.
Naanị otu ụzọ n'akụkụ ókè -ala ọwụwa anyanwụ ka ghe oghe.
Nchịkwa ụgbọ elu US Federal Aviation Administration (FAA) wepụtara nkwupụta taa na -ekwupụta na amachibidoro ụgbọ elu ndị nkịtị nke US ka ha na -efefe na mpaghara Afghanistan niile ewezuga otu ụzọ ka ghe oghe n'akụkụ oke ọwụwa anyanwụ.
Ndị na-ebu ndị nkịtị “nwere ike ịga n'ihu na-eji otu ụzọ ụgbọ elu dị elu n'akụkụ ókè ọwụwa anyanwụ nke ime ime obodo. Onye ọ bụla na -ahụ maka ụgbọ elu obodo US nke chọrọ ịgbaba n'ime ma ọ bụ gafere Afghanistan ga -enwerịrị ikike n'aka FAA, "nkwupụta ahụ kwuru.
Na mbụ, na FAA kwuru na Ọdụ ụgbọ elu Kabul Ọ nweghị onye na -achịkwa ya, a naghị eme njikwa okporo ụzọ na Afghanistan.
Na Tuesday, ndị ọrụ US ahapụla Afghanistan kpamkpam. Ndị otu Taliban kwuru na Afghanistan enwetala nnwere onwe zuru oke.